Dr. Tint Swe's Writings: ကိုယ်ဝန်နဲ့ အာထွာဆောင်း မေးခွန်း
ဆရာရှင့် ဆရာ့စာတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်စောနိုင်သမျှစောပြီး ultrasound ရိုက်ဖို့ သတိပေးထားတာကျွန်မဖတ်ရပါတယ် ကျွန်မကိုယ်ဝန်နှစ်ကြိမ်ဆောင်ဖူးပါတယ် ပထမတကြိမ်တုန်းကမြို့တမြို့ဆရာဝန်ကတယောက် ဒုတိယတကြိမ်မှာမြို့တမြို့ ဆရာဝန်တယောက်ပါ သူတို့နှစ်ဦးလုံး ကျွန်မကစိတ်ပူလို့ ultrasound ရိုက်ချင်တယ်ပြောတာ မလိုအပ်သေးဘူးလို့ ငြင်းခဲ့ကြပါတယ်ဆရာ ကျွန်မကိုယ်ဝန်နှစ်ကြိမ်လုံး နှစ်လကျော်ရုံလေးနဲ့ပျက်ခဲ့ပါတယ် ultrasound ရိုက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုကယ်နိုင်ပါသလား ညွှန်ပြပေးပါဦးရှင့် ဆရာကျန်းမာချမ်းသာပါစေရှင်
အဲလိုတော့ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ ဆန်းတယ်။ ပျက်ချင်တာကို မြဲအောင်လူပ်ရခက်တယ်။ မြဲမှာက တော်တ်ေတန်တန်နဲ့ မပျက်။ တစ် ၅ လုံးကိုပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
ဖျက်ချတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ဝန်အလိုလိုပျက်တာကို Miscarriage ခေါ်တယ်။ Abortion မခေါ်ပါ။ ပျက်စေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ မတော်ဆဖြစ်တာနဲ့ သဘာဝအကြောင်းတရားတွေ ရှိတယ်။ အများဆုံးဖြစ်တာက သန္ဓေသားရဲ့ ခရိုမိုဆုံး ပုံမှန်မဟုတ်လို့ ဖြစ်တာ၊ ၅ဝ% ရှိတယ်။ အဲတာကို ပြုပြင်လို့မရနိုင်ပါ။ အများစုက စောပြီးပျက်တယ်။ တချို့မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာတောင် မသိဘူး။ ၆၁့၉% ၁၂ ပတ် အတွင်း ပျက်ကျတယ်။ ဒီအထဲက ၉၁့၇% က ပျက်ကျတယ်ဆိုတာတောင် ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ကြပါ။ ၁ဝ ပတ် ကျော်တာနဲ့ အလိုလိုပျက်ဘို့အခွင့်အလမ်း သိသိသာသာ နည်းလာပါပြီ။
မတော်တဆထိခိုက်မှုဆိုတာ တမင်တကာ ထိခိုက်မှုနဲ့ စိတ်ဖိအားတွေဖြစ်တယ်။ သာမန် အားကစားလုပ်လို့ ပျက်မကျပါ။ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်တာစောလို့ ပျက်ကျတာ မရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ အသက်ငယ်လွန်းတာ၊ ကြီးလွန်းတာကြောင့်လဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ၃၅ နှစ်အောက်မှာ ၁၅%၊ ၃၅-၄၅ နှစ်ကြားမှာ ၂ဝ-၃၅%၊ ၄၅ နှစ်အထက် ၅ဝ% ပျက်ကြတယ်။ ဆောရီး။
ကိုယ်ဝန်ရှိကာစ အာလ်ထွာရိုက်သင့်တာတွေရှိတယ်။ ဆီးစစ်လို့ မှားပြီး + ပြတာမျိုးမှာ အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့ အတည်ပြုရတယ်။ ကိုယ်ဝန်က သားအိမ်ထဲတည်းတာ ဟုတ် မဟုတ်လည်း အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့ အတည်ပြုရတယ်။ စောရိုက်တာမှာ မမှန်တတ်တာလည်းရှိတယ်။ မွေးမဲ့ရက်တွက်ချက်တာ လွဲနိုင်တယ်။ သတ်မှတ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ပါတ်မှာ ရိုက်ရတယ်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ကိုသိဖို့ သတ်မှတ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ပါတ်မှာ ရိုက်ရတယ်။
1. Miscarriage Prevention ကိုယ်ဝန်မပျက်အောင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/miscarriage-prevention.html
2. Miscarriage အလိုလို ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/miscarriage.html
3. Missed abortion ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/missed-abortion.html
4. Pregnancy and Ultrasound (1) ကိုယ်ဝန်ဆောင် အာလ်ထွာဆောင်း (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/pregnancy-and-ultrasound.html
5. Pregnancy and Ultrasound (2) ကိုယ်ဝန်ဆောင် အာလ်ထွာဆောင်း (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/pregnancy-and-ultrasound-2.html
6. Pregnancy and x-ray at airport ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ လေဆိပ်ဓါတ်မှန် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-x-ray-at-airport_24.html
7. Risks of an X-ray and Diagnostic ultrasound အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့ ဓါတ်မှန်အန္တရာယ် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/risks-of-x-ray-and-diagnostic-ultrasound.html
8. Ultrasound and Pregnancy အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/ultrasound-and-pregnancy.html
9. X-rays and infertility ဓါတ်မှန်နဲ့ ကလေးမရခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/x-rays-and-infertility.html